सकारात्मक चिन्तन नै खुशी,सुखी जीवन बनाउने उपाय हो - Sabal Post
सकारात्मक चिन्तन नै खुशी,सुखी जीवन बनाउने उपाय हो
जीवनबारे हरेक व्यक्तिका आ–आफ्नै धारणा रहेका हुन्छन् । यही नै हो भनेर ब्याख्या गर्न गाह्रो छ । तर यो चाहिँ सत्य हो कि जीवन साच्चै अमुल्य छ । यस धर्तिको सर्वोत्कृष्ट र सर्व शक्तिशाली प्राणी हो ‘मानव जीवन’ । श्रृष्टिको यस ‘चमत्कारीक रचना’लाई जसले ‘सुन्दर उपहार’का रुपमा ग्रहण गरेको हुन्छ उसले सोही अनुशार चलायमान रही सुकर्म मार्फत ‘सुनमा सुगन्ध’ थपिरहेको हुन्छ । अर्थात जीबनलाई ‘सार्थक’ बनाएको हुन्छ । जीवन भनेको अनुभवको संगालो हो । हुन त यसबारे व्यक्तिपिच्छेको बुझाई फरक हुन्छ नै । जन्म र मृत्युको बीचमा गरिने कर्म नै जीवन हो । अर्थात् जीवन्तता नै जीवन हो । त्यो जीवन्तता कर्मसँगै लक्ष्य र उद्देश्यमा पनि हुनुपर्छ ।
डा. नारायण रेग्मी संगको कुराकानी
धन दौलत तथा गाडी घोडा, यी यावत् कुराहरुको वरिपरि मान्छे रुमल्लिरहेका देखिन्छन् यि सबै कुराहरु यहाँलाई के लाग्छन् रु
मेरो मान्यता युवाहरूले स्व–अध्ययन गर्नुपर्यो भन्ने हो । युवाहरुमा स्वअध्ययनको कमी छ । आफूलाई अध्ययन गरिसकेपछि आफ्नो बाटो आफै पहिँल्याउन सक्छन् । आफ्नो क्षमता बृद्धिमा केन्द्रित हुने वित्तिकै आफ्नो क्षमता थाहा हुन्छ । त्यो क्षमता थाहा भइसकेपछि आफ्नो भविष्य पनि थाहा हुन्छ । म सरगरमाथा चढ्छु की चढ्दिनँ रु मलाई दम लाग्छ की लाग्दैन रु म फिजिकल्ली ठिक छु की छैन रु जस्ता कुरामा ध्यान नदिइ अरु गए म पनि जान्छु भनेर हुँदैन । त्यसैले युवाहरूले जीवनमार्ग तय गर्न हिँड्न आत्म समीक्षा गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, समाजबाट स्थापित मूल्य र मान्यतालाई आफ्नो ठाउँमा राखेर त्योभन्दा माथिको बाटो पनि हिड्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न किनपनि जरुरी छ भने कतिपय सामाजिक मूल्य मान्यता सही पनि हुँदैनन् । सामाजिक मूल्य मान्यतालाई जज गर्न सक्ने र आफ्नो आत्माले उपयुक्त ठानेको काम गरेपछि जिन्दगी बन्छ । यसले व्यक्ति रूपान्तरणसँगै समाजमा सकारात्मक योगदान पुग्छ । मैले अपनाएको मार्ग नै यही आत्म समीक्षाको मार्ग हो ।
दार्सनिक तथा समाज सुधारकहरू बाटै हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ । तिनले भविष्यको चिन्ता नगरिकनै वर्तमानलाई सुन्दर बनाइरहेका हुन्छन् । भविष्य बनाउन पनि वर्तमानमा काम गर्नै पर्ने हुन्छ ।सुन्दर भविश्य सुन्दर वर्तमानबाटै सम्भव छ । वर्तमानलाई आफ्नो अनुकुल बनाएमा भविश्य आफै अनुकुल हुन्छ ।
जो मान्छे रक्सीले असर गर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सेवन गर्छन्, त्यस्तो मान्छेले कसरी जीवन सुन्दर बनाउँछ रु बनाउँदैन नि । सकारात्मक चिन्तन नै जीवन सुन्दर बनाउने पहिलो उपाय हो । सुन्दर जीवन बनाउने अर्को तरिका भनेको समाजभित्र आफूलाई पोजेटिभ्ली एकाकार गर्ने हो । किनकी पृथक पृथक मान्छेहरू भएर नै समाज बनेको हो । त्यहाँ भित्र आफ्नो स्थान त आफैले तय गर्ने हो नि । अनि जीवन सुखी र समृद्ध हुन्छ ।
स्वभावत जीन्दगीमा उतार चढाव हुन्छन् नै । जो मान्छेहरु यसलाई सहज रुपमा लिन सक्दैनन् ति मान्छेहरूमा विचलन आउँछ । सुन्दरता टिकाउन धेरै गारो छ नि । जस्तै स् फूलको सुन्दरता पनि क्षणिक हुन्छ । जुन चमकता छ, त्यो सधै उस्तै कहाँ रहन्छ र !
भनेजस्तो भएन या गर्न सकेन भने मान्छे समयलाई दोष दिन्छ । यानेकी आफु अनुशार हुन नसकेकोमा दुखि हुन्छ । प्रतिकूल अवस्थालाई कसरी अनुकूलतामा बदल्ने ? अधिकांश मान्छेहरू सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वा पर्यावरणीय अवस्थाले सफल हुन सकिँन भन्ने आरोप लगाउँछन् । सफल मान्छेहरूले परिस्थिति र परिवेशलाई दोषारोपण गर्दैनन् । बरु, धन्यवाद दिन्छन् । चाहे परिस्थिति र परिवेशले सहयोग गरून् वा नगरून् । नकारात्मकताबाट हेर्यौं भने परिस्थितिलाई र अरू वातावरणजन्य कुरालाई हामी आफ्नो बाधा ठानेर बस्छौं । त्यो गलत हो । जस्तोसुकै चुनौती आए पनि त्यसलाई बल, बुद्धि र सामथ्र्यले समाधान गर्ने हो । त्योसँग जुध्ने हो, भाग्ने होइन । भाग्नु जीवन होइन ।
मृगौला रोगीको उपचार सहयोग याचना
संघियता कार्यन्वयन गराउन हामी प्रतिबद्ध छौ:स्वास्थ्य राज्य…
पार्टीभित्र दर्शन र सिद्धान्तमा काम कम हुन…